Muhiimadda midabada marka la sameynayo | Abuurista khadka tooska ah
Midabada waa xubno muuqaal ah oo nolosha siiya kala soocnaanta deegaankeenna. Midab la'aan, noloshu waxay noqonaysaa mid aan micno lahayn oo waxyaabo badan oo aan maanta ognahay inay joogsan doonaan inay jiraan, sida, farshaxan ama naqshad ku saleysan midab. Midabku wuxuu ahaa shay ay barato saynisku, maxaa yeelay habka uu u dhaqmayo waa mid aad u qaas ah oo qof walba si kala duwan u saameeya.
Midabka waa mid awood badan oo xitaa awood u leh abuurista shucuur kala duwan waxayna ku tusin kartaa guul darrooyinka caafimaadka jidhka bini'aadamka illaa isbeddellada deegaanka qaarkood. Waxaas oo dhan, midabka looma isticmaalin oo keli ah daraasad si isdaba joog ah ay u sameeyeen naqshadeeyayaasha iyo farshaxanlayaashu, laakiin xubnaha bulshada sayniska.
1 Muhiimadda midabku markuu samaynayo
2 Mid ka mid ah buugaagta ugu quruxda badan adduunka
Muhiimadda midabku markuu samaynayo
Xaqiiqdii gudaha 1847 injineer madani ah wuxuu u adeegsaday midab mabda'a joomatari. Sidaas oo kale! In kasta oo ay u muuqato wax aan macquul ahayn, midabka waxaa loo adeegsaday in lagu dhajiyo mid ka mid ah meelaha ugu adag ee xisaabta, maxaa yeelay waa mid ka mid ah calaamadaha ugu fudud uguna dhaqsaha badan ee lagu xasuusto laguna garto.
Aqoonyahan Oliver Byrne, sanadkii 1810-kii way fududaatay in la daabaco daraasaddiisa joomatari midab leh, maxaa yeelay dadka waxay u noqon laheyd wax badan oo xiiso leh oo aan dhib badneyn oo aan caqli gal aheyn in la fahmo. Buugiisa la yiraahdo "Cunsurka EuclidMidabbada loo adeegsado inuu noqdo isha ugu weyn ee dooddiisa.
Si aad u yara galno macnaha taariikhiga ah, Euclid wuxuu ahaa xisaabyahan Griig ah, khabiir ku ah joomatari.
Xaqiiqdii, Euclid waxaa loo yaqaanay "Aabaha joomatari”Oo wali magaca ayuu hayaa maanta. Buuggiisa ugu caansan waxaa loo yaqaan "Elements" waana mid ka mid ah shuqullada cilmiga ugu aqoonsan adduunka oo dhan, halkaas oo uu ku soo bandhigo qaabab joogto ah oo ah isha ugu weyn, taas oo ah, wareegyada, saddexagalka, diyaaradaha, khadadka, iwm.
In kasta oo xaqiiqda ay tahay in joomatari ahaaneed Euclid loo adeegsado wax ka sarreeya wax kasta oo lagu barayo waxbarashada aasaasiga iyo dugsiga sare, buugga "Elements" ayaa si ballaadhan looga dabaqay dhinacyada sida cilmiga xiddigiska, fiisigiska, kimistariga iyo xitaa injineernimada. Ilaa maanta, joomatari Euclidean ayaa sii socota in la dabaqo iyo xitaa, inkasta oo wax ka badal badan, qaabka asalka ah waligiis lama badalin.
Joomristrist-yahan cajiibka ahi wuxuu udub dhexaad u ahaa Oliver, oo ah injineer madani ah oo go’aansaday inuu ku dabaqo aqoonta laga soo qaatay buugga "Elements" si uu u abuuro shaqadiisa "Elements of Euclid", oo ku salaysnayd dood midab leh. Asal ahaan waxa ay sameysay ayaa badalay dhamaan astaamihii guud ahaan loo adeegsaday joomatari ahaan midabbo, sidaa darteed barashadu aad bay uga fududayd.
Mid ka mid ah buugaagta ugu quruxda badan adduunka
Buuggu ma aha oo keliya ujeeddooyin waxbarasho, laakiin ujeeddooyin qurxin ayaa sidoo kale jira. Xaqiiqdii, waxaa lagu tilmaamay inay tahay mid ka mid ah buugaagta ugu quruxda badan adduunka. Tani waa sababta oo ah waxay isticmaashaa midabbo sida jaalle, casaan iyo buluug oo loo qaybiyay bogga oo dhan iyo in kasta oo bogagga qaarkood ay ku jiraan lambarro iyo xarfo oo keliya, kuwan ayaa lagu daabacay midab ahaan si aan loo lumin ruuxa shaqada.
Jaantusyada joomatari ayaa sidoo kale jira oo waxaad arki kartaa wareegyo, jibbaarano iyo saddexagallo lagu sameeyay midabbo dhalaalaya oo soo jiidasho leh. Buuggu wuxuu noqday mid ay xiiseeyaan naqshadeeyayaasha garaafyada, maxaa yeelay waa hab casri ah oo casri ah oo xisaabta lagu dhex daro farshaxanka iyo naqshadeynta.
Waa la arki karaa sida naqshadeynta garaafku ugu gudubtay aagag kala duwan, sida xisaabta iyo suugaanta kiiskan. Qaabku ma noqon oo keliya qaab muujinta, laakiin mahad buuggan sidoo kale waa hab wax ku ool ah oo cusub oo waxbarasho iyo midabku wuxuu ahaa aaladda ugu weyn ee dhinacyo badan oo nolosha ah iyo gaar ahaan ruuxa aadanaha., Iyo qaabka garaafka ah waa Tiir tixgeliyey.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Midabyadu waa muhiim markay tahay qaabeynta